प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा नेमकिपा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभालाई राजनैतिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलोको रूपमा उपयोग गर्दै छ । निर्वाचनलाई पनि वर्गसङ्घर्ष र राजनैतिक सङ्घर्ष ठान्ने नेमकिपाले यी तीनवटै तहलाई देश र जनताको सेवा गर्ने दबुको रूपमा उपयोग गर्दै आएको हो । नेमकिपा जोताहा किसानहरूलाई मोहियानी हक तथा भूमिको उचित वितरण गर्न, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक खेतीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै छ । लाखौँ युवाहरूलाई दास व्यापार गरेजस्तै सस्तो ज्यामीको रूपमा विदेश पठाएर देश विकास नहुने नेमकिपाको धारणा हो । देशको आफ्नै उद्योगधन्दालाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन सके युवाहरूलाई स्वदेशमै सरकारले रोजगारको बन्दोबस्त गर्नसक्छ । देशका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्री उत्पादन गर्न उद्योगधन्दा खोल्नु आवश्यक छ । तर, सरकार खोलिएका कारखाना तथा उद्योगहरू पनि निजीकरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै छ ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो । सरकारले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेर देशभर बिजुली पु¥याउनुपर्छ, देशभर बिजुली वितरण नगरी कुनै पनि देशलाई वितरण गर्नु ठीक होइन । बिजुलीलाई ग्यासको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको बिजुली सस्तोमा भारतलाई बिक्री गर्ने र भारतको महँगो बिजुली नेपालले लिने कार्य रोक्नुपर्छ । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउनुपर्छ भन्ने नेमकिपाको धारणा हो । चिकित्सा प्रविधि, विज्ञान र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई मावि तह निःशुल्क र अनिवार्य तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि नेमकिपाको हो । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई नियन्त्रण गर्ने साम्राज्यवादी र जनविरोधी सोचको सट्टा क्षेत्रीय र स्थानीय तहमै विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा शिक्षामा पुरातन र सामन्ती सोच भएका नाफामुखी व्यक्तिहरूलाई अङ्कुश लाग्नेछ । भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र अध्ययनमा नेमकिपाले जोड दिइरहेको हो । यही कारण भक्तपुर नपाले यी विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको हो ।
नेमकिपाले पहिलेको निर्वाचनमै हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एक एक अस्पताल, प्रसूतिगृह स्थापना गर्न र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्न जोड दिएको हो । नेमकिपा शासक दलहरूको भागबन्डाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको विरोधमा छ । यसको कारण नेपालको न्याय प्रशासन बदनाम भएको छ । न्याय प्रशासनमा भइरहेको कर्मचारीहरूको चलखेल र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने माग नेमकिपाको हो । विदेशीलाई सजिलैसँग वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नहुने नेमकिपाको अडान कायम छ । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको नेपालमा विदेशीलाई पनि नेपाली नागरिकता दिएमा भोलि नेपालीभन्दा विदेशीहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढ्नेछ र नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसबेला देशको स्थिति के होला ?
हरेक गाउँ र नगरपालिकाहरूमा शिशुशाला र बालोद्यान खोल्नुपर्ने माग पनि नेमकिपाको हो । भनपाले शिशु स्याहार केन्द्र खोलिरहेको छ । यसलाई सबै वडामा पु¥याउने भनपाको उद्देश्य रहेको छ । यसले एकातिर महिलाले रोजगारी पाउनेछन् भने अर्काेतिर बालबालिकाहरूको जीवन सुरक्षित हुन्छ र आमाबुबा आफ्नो काममा जान पाउँछन् । हरेक परिवारमा परिवारका सदस्यहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हरेविचार गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले आदर निकेतन खोल्नुपर्ने माग पनि नेमकिपाले उठाएको हो । तद्नुसार भनपाले आदर निकेतनको भवन बनाउँदै छ । नेमकिपाले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गरिरहेको छ । यसरी नेमकिपा देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरिरहेको छ ।
क्यान्सर उपचारको लागि सुरुमै पहिचान हुनुपर्ने
नेमकिपाको घोषणापत्र जनप्रतिनिधिहरूका लागि मार्गदर्शन
के स्वाँ स्वाँ हुनु दीर्घ दमखोकी (COPD) मात्रै हो त ?
असल नागरिक सदा सम्मानित हुने